गम खोलामा दशैँ पूर्णिमामा महोत्सव गरिने - Paschimnepal.com
सुर्खेत । सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकामा महोत्सव सञ्चालन गरिने भएको छ । लेकबेशी युवा मञ्च नेपालको आयोजनामा लेकबेशीको वडा नं. ४ दशरथपुरको गमखोला आगामि दशैँ पूर्णिमामा कात्तिक ७, ८ र ९ गते सञ्चालन गरिने भएको हो ।
खेलकुद, कला, संस्कृति, तथा कृषिमा अर्गानिक हाम्रो सान ! समृद्ध प्रदेश कर्णालीको पहिचान भन्ने मुल नारा सहित ‘लेकबेशी घरेलु, कृषि, खेलकुद तथा सांस्कृतिक’ महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको मञ्चका अध्यक्ष किशोर पोखरेलले जानकारी दिए ।
स्थानीय कला, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिदैँ स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु तथा कृषि उपज वस्तु प्रदर्शनीमा राखिने भएको छ ।
महोत्सवमा विभिन्न खेलकुद तथा कला संस्कृति झल्काउने झाँकी सहित स्थानीय र राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुती रहने छ । महोत्सवमा व्यापारी र उद्योगीहरुका लागि स्टलको समेत व्यवस्था गरिएको जनाईएको छ ।
खेलकुदतर्फ खुला पूरुष भलिवल प्रतियोगिता, लोक नृत्य प्रतियोगिता र सटफुट प्रतियोगिता हुने अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । भलिबलको प्रथम पुरस्कार ४० हजार नगद सहित प्रमाण पत्र प्रदान गरिने उनले बताए । दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नेले नगद २० हजार र प्रमाण पत्र सहित सम्मान पत्र पाउने बताए ।
खुला लोक नृत्य प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ हुनेलाई नगद एक हजार सहित सम्मान पत्र प्रदान गरिने छ । त्यस्तै, सटफुट प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद २ हजार सहित प्रमाण पत्र प्रदान गरिने छ भने दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नेलाई नगद एक हजार सहित प्रमाण पत्र प्रदान गरिने छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज २३, २०७५ 5:45:00 PM
Prevपञ्चपुरीकाे खमारी जलविद्युतकाे समितिले पायाे पूर्णता
Nextचीनसंग जोडियो कर्णाली : हिल्सामा खाेलियाे अध्यागमन कार्यालय